सभामुख चयन पेचिलो बन्दैः विधेयक अधिवेशनका एक महिना उपलब्धि शून्य | Kendrabindu Nepal Online News
सभामुख चयन पेचिलो बन्दैः विधेयक अधिवेशनका एक महिना उपलब्धि शून्य
२७ पुष २०७६, आईतवार १५:३५
प्रकाश लुईटेल –
संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्यो । विधेयक अधिवेशनको रूपमा महत्वपूर्ण मानिने हिउँदे अधिवेशनको करिब एक महिनाको यो अवधि प्रतिनिधि सभाका लागि उपलब्धिशून्य रह्यो । कारण, प्रतिनिधिसभा झण्डै चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अधिवेशनको पहिलो दिन पुस ४ गतेको बैठकपछि तय गरिएका प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिंदै आएको छ । आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसरै स्थगित गर्दै माघ ६ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि पुस ११ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै १६ गतेका लागि बोलाइएको थियो । १६ गतेको बैठक त १५ गते नै सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै २७ गतेका लागि बोलाइयो ।
यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभामा सभामुख रिक्त छ । सत्तारुढ दलभित्रैको भागबण्डा मिलाउन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कुनबेला राजीनामा दिनुपर्ने हो टुंगो छैन । नयाँ सभामुख चयनमा सहमति जुटाउन असफल रहे पनि, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई हटाउने सहमति जुटाउन नेकपा नेतृत्व सफल भएको छ । यद्यपि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पटक पटक राजीनामा नदिने बताउँदै आएकी छन् । पछिल्लो पटक शनिबार नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले गरेको राजीनामा गर्न लगाउने निर्णय उनले अस्वीकार गरेकी छन् । पार्टीका दुवै अध्यक्षको निमन्त्रणामा आइतबार बालुवाटार पुगेकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेर निकास दिन अध्यक्षद्वयले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेकी हुन् । उनले सभामुखमा इच्छा देखाउँदै आएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ रहेको बताइएकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले यसरी पार्टी नेतृत्वको आग्रह ठाडै अस्वीकार गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
त्यसो त तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट हटाउने विषयमा नेकपाभित्र कहिले पनि विमति थिएन, मात्र सभामुख चयनमा सहमतिको पर्खाइ मात्र थियो । तर, शनिबार सभामुखमा सहमति नजुटे पनि सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न भन्यो । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार पनि नेकपाभित्रबाटै उपसभामुख भएकी तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा कायम रहँदा नेकपाबाटै सभामुखको उम्मेद्वारी दर्ता गराउन मिल्दैन । यही संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर नेकपाले सभामुखका लागि बाटो खोल्न उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेको छर्लङ्ग छ । तत्कालीन सभामुख महराले गरेको गल्तीको असर उपसभामुखले भोग्नुपर्‍यो ।
पुस ४ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुने तयारी गर्दै गर्दा नेकपाका दुवै अध्यक्ष सभामुख चयनमा सहमति नजिक थिए । आफूनिकटको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुरुदेखि नै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने अडानमा छन् । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका पुष्पकमल दाहाल पूर्वमाओवादी पक्षबाट सभामुख बन्नुपर्ने आफ्नो अडानमा लचिलो बन्दै थिए । प्रतिनिधि सभाको सभामुख नपाए राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लिने विकल्प सोच्न थालेका प्रचण्डको अडान सभामुख चयनमा एकाएक बढेर आयो । कारण थियो, पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूको दवाब र आफूमाथि पूर्वएमाले पक्षमा समाहित हुँदै गएको आरोप लाग्ने डर ।
एकीकृत पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व बढाउँदै जाने रणनितिका लागि पनि पूर्वमाओवादी पक्षको भरोसा टुटाउन नहुनेमा प्रचण्ड सचेत छन् । पार्टी एकीकरणका बेला भएको सहमतिलाई आधार बनाउँदै पूर्वमाओवादी पक्षबाटै सभामुख हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्न प्रचण्डलाई अफ्ठ्यारो पनि छैन । त्यसैले पनि सभामुखमा अडान नछोडेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोडेर कार्यकारी अध्यक्ष बन्न चुनौती दिनसमेत भ्याए । यता प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकटको व्यक्ति नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने अडानमा कायम छन् । तत्कालीन सभामुख महराले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अधिवेशनमा एम.सी.सी. प्रस्ताव पेश गर्ने आफ्नो आग्रह अस्वीकार गरेका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकटको व्यक्तिलाई सभामुख नबनाई नछोड्ने अडानमा छन् । यसैकारण सभामुख छनौटको मुद्दा दुई अध्यक्षवीच थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत नेकपाभित्र अन्त्य हुन नसकेको पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले पक्षबीच रहेको आशंका र अविश्वासको परिणाम संघीय संसदको महत्वपूर्ण सदनका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभाले भोगिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू रोकिएका छन् । नागरिकहरूका समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउने थलोका रूपमा रहेको संसदको बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुँदा नागरिक आवाज रोकिएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ, तर जवाफदेही हुनुपर्ने संसदकै एउटा महत्वपूर्ण सदनको बैठक एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । यसमा पनि सत्तारुढ दलभित्रै सभामुख चयनमा देखिएको मतभेदले बैठक अवरुद्ध हुनु निश्चय नै राम्रो कुरा होइन ।
नेकपा नेतृत्वले यस्तो अन्यौल अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरी सभामुख चयनमा सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ । नेताहरूको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थका कारण संसदको बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नु संसदको बहुमतप्राप्त दलको नेतृत्वलाई शोभा दिने कुरा होइन । सत्तापक्षको निगरानी र संसदीय परम्परा अभ्यास गर्ने थलो संसदको बैठक सुचारु गराउन प्रतिपक्षको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चार महिनादेखि प्रतिनिधि सभा सभामुखविहीन रहँदा समेत मौन देखिन्छ । प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारको विरोध मात्र गर्ने भन्दा पनि संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता स्थापित गराउनेमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रकाश लुईटेल समसामयिक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । उनी केन्द्रबिन्दु अनलाइनका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।
nepal comunist party, Nepali cognress, speaker, सभामुख
Prevसत्तारुढ दल एमसीसीबाट पछि हट्न खोजेको कांग्रेस नेता देवको आरोप
नवलपरासीका उम्मेदवारले २ वर्षसम्म पनि बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरणNext
पत्रकार महासंघद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षण
प्रजातन्त्र दिवस : सभामुखद्वारा शुभकामना
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र क्यानडाका सभामुखबीच भेटघाट
सभामुख र जापानी राजदूतबीच भेटवार्ता
आफू डबल स्ट्याण्ड नहुने सभामुखकाे प्रतिबद्धता
सभामुख सापकोटा नेकपाबाट अलग
यस वर्षको मिस नेपालमा ४ वटा मात्रै विधा (भिडियोसहित)
कोरोनाको महामारीविरुद्ध लड्न डव्लुएचओको आग्रह (भिडियोसहित)
विद्यार्थी नेता पक्राउको विरोधमा विप्लपले बुधबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने
चीनमा कोरोना संक्रमित घट्दैदेखि मिस नेपालका लागि आवेदन खुल्लासम्म (भिडियोसहित)
नेपाल ट्रष्टद्वारा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक (भिडियोसहित)
पाँचौं काष्ठमण्डप कप बिहीबारदेखि
मुक्तिनाथ विकास बैंकको आकर्षक ब्याजदरमा दुई कर्जा योजना
विमलको ह्याट्रिकमा मछिन्द्रको शानदार जीत
'संसारले अबको युद्ध बन्दुकबाट लड्दैन'-डिआइजी राजीव सुब्बा (भिडियोमा)
'व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गरे मिलेर प्रतिवाद गर्छौं'